I-SABC 2 lijelo losasazo losapho laseMzantsi Afrika eliphantsi kweQumrhu losasazo laseMzantsi Afrika (SABC). Usasazo lwe-SABC 2 lwenziwa ngesiNgesi, isiBhulu, isiVenda nesiTsonga
2.1 Imidlalo kamabonakude, iDrama kunye neTelenovelas
2.2 Uthotho (ii-Series)
2.3 Ezentetha kunye neMagazini
2.9 Ulutsha kunye neMfundo
Yaqalwa nge-6 kaJanuwari 1976 phantsi kwegama elithi SABC TV / SAUK TV. Ngomhla woku-1 kweyoMqungu ngo-1982, yatshintsha igama layo laba yi-TV1, ngokusungulwa kweenkonzo ezimbini ezintsha: usasazo lwe-TV2 ngesiZulu nangesiXhosa kunye nokusasazwa kwe-TV3 ngesiSuthu nesiTswana, zombini ezijoliswe kubaphulaphuli basezidolophini abaNtsundu. Ijelo eliphambili, ngoku elibizwa ngokuba yiTV1, lahlulwe ngokulinganayo phakathi kwesiNgesi nesiBhulu, njengangaphambili. Ngo-1985, kwaqaliswa inkonzo entsha ebizwa ngokuba yi-TV4, iphethe ezemidlalo kunye neenkqubo zokuzonwabisa, kusetyenziswa ijelo ekwabelwana ngalo yi-TV2 kunye ne-TV3, eyeke ukusasaza ngo-9: 30 ebusuku. Ngo-1992, i-TV2, i-TV3 kunye ne-TV4 zahlanganiswa zayinkonzo entsha ebizwa ngokuba yiCCV (Contemporary Community Values). Ijelo lesithathu laziswa laziwa njenge-TSS, okanye iTopSport Surplus, iTopSport iligama lophawu lwezemidlalo kwi-SABC, kodwa oku kwathathelwa indawo yi-NNTV (iNational Network TV), ijelo lezemfundo, elingelilo elorhwebo, ngo-1994. Ngo-1996, i-SABC yahlengahlengisa amajelo ayo omabonakude amathathu ngeenjongo zokwenza ukuba abamele amaqela eelwimi ezahlukeneyo. La majelo matsha abizwa ngokuba yi-SABC 1 (eyayisakuba yiCCV), i-SABC 2 (eyayisakuba yi-TV1) kunye ne-SABC 3 (eyayisakuba yi-NNTV). Ixesha elabelwe inkqubo yolwimi lwesiBhulu kwitshaneli entsha (i-SABC 2) lehle ukusuka kuma-50% laya kwi-15% - intshukumo eyahlukanisa izithethi zesiBhulu.
Emva kokuba iSABC ihlengahlengise amajelo ayo kamabonakude, iSABC 2 yathatha indawo yejelo lakudala leTV1. Ukuncipha kokuqaqambeka kwesiBhulu kwacaphukisa abantu abaninzi abathetha olu lwimi, nangona eli jelo lisenenani elibonakalayo lenkqubo yesiBhulu, kubandakanya ukusasazwa kweendaba rhoqo ngeveki ebusuku ngo-19: 00 nangeempelaveki ngo-18: 00.
I- M-Net ebona imfuno yentengiso, yaqalisa ijelo lesiBhulu i-KykNet ngo1999, walandela ngo2005 ngejelo lomculo i-MK (eyayisaziwa ngokuba yiMK89). Ngo-2009, uM-Net wasungula iKoowee, itshaneli yabantwana yosasazo kwi Afrikaans.
Imidlalo kamabonakude, iDrama kunye neTelenovelasEdit
Eli jelo lithandwa kakhulu ngee-soapies zalo ezimbini ezisebenza ixesha elide i-7de Laan kunye no Muvhango, imidlalo efana ne-Erfsonders, Gerramtes kwi-die Kas, Roer Jou Voete kunye ne-90 Plein Street, kunye ne-Telenovelas ezifana ne-Keeping Score kunye ne Giyani: Land of Blood.
I-SABC 2 kwixa elidlulileyo, ibisasaza uthotho lwamanye amazwe afana ne- i-NCIS, Pretty Little Liars, Teen Wolf ne Vampire Diaries. Nangona kunjalo eli jelo ngoku lijolise kwinkqubo ezenyaniso ezasekuhlaleni kunye nezinto ezikhoyo ezinje ngeSpeak Out, Relate, kunye ne Saving Our Marriage, ii-comedies ezinje ngeGa Re Dumele kunye noKe Ba Bolleletse, kunye nothotho lwamanye amazwe afana ne- American Ninja Warrior.
Ezentetha kunye neMagaziniEdit
Ijelo linenani elincinci lentetho, lokuhamba kunye nemiboniso yamaphephancwadi. Imiboniso ibandakanya iMotswako, iVusaseki, iNhlalala yaRixaka, 50/50, iVoetspore kunye neTalkAbility.
I-SABC 2 idlala umculo we-afro-soul kunye nomculo wep pop ungenelela phakathi kweenkqubo. Ikwanayo nemiboniso yomculo efana neAfro Cafè, i-Soul'd Out Sessions, i-Kliphard, i-Musiek Roulette kunye neNoot vir Noot.
Eli jelo lineenkqubo zonqulo ezijolise kubuKrestu, ebuYudeni nakumaHindu. Imiboniso yasekhaya ibandakanya owona mboniso mde I-It's Gospel Time, i-Gospel Classics, i-Psalted, i-Simcha, i-Derech Erets, kunye ne-Issues of Faith.
I-SABC 2 kunqabile ukuba isasaze ezemidlalo ngenxa yemicimbi yenkxaso-mali, kwaye endaweni yoko igxile kwimidlalo. Eyona nto yayo ijolise kumdlalo wamanqindi, umbhoxo, ukuqubha nembaleki.
Iindaba kunye neMicimbi yangokuEdit
Eli jelo libonelela ngeebhulethini zokuqala ezintathu ze Tshivenda / Xitsonga, Afrikaans, kunye SeSotho / SeTswana / Sepedi iilwimi. Ukongeza, ineenkqubo zemicimbi yangoku enje ngeFokus, Ngula Ya Vutivi, Zwa Maramani kunye neLehlo La Sechaba. Ikwazisa ngesidlo sakusasa esona sisekude kakhulu esidlala kusasa. Iyaziwa ngeziganeko zesizwe ezinje ngokusungulwa kukaMongameli, iNtetho kaMongameli engoBume beSizwe, iiNtetho zoHlahlo-lwabiwo mali, kunye nezehlo zasePalamente.
Ijelo laziwa ngokuba ziimovie ezonwabisayo zosapho kunye needrama, ii-autobiographies kunye neemovie zoopopayi.
Ulutsha kunye neMfundoEdit
I-SABC 2 inoluhlu lweemiboniso ezivela kwisilayiti sayo seMfundo se-SABC Education, ikakhulu iTakalani Sesame, It's For Life, i-Epic Hangout, njl.njl. Kwaye izisa nemiboniso yemfundo malunga nendlela yokulawula imali nokujolisa kubantu abadala, ngokunjalo Njengeminye imidlalo yabantwana evela ku Disney Junior, nokuba yingoma yabo yesiNgesi yoqobo okanye babizwe ngeelwimi zase Mzantsi Afrika njenge The Lion Guard ngesi isiZulu, Ben 10 ngesiBhulu nakwi Doc McStuffins kwi Sesotho. Kulutsha nakwishumi elivisayo inika uthotho lwamahlaya ukusuka kwiChannel yeDisney nakwi Nickelodeon, njenge ICarly, True Jackson, VP, A.N.T. Farm, kunye neCookabout, kunye nothotho lwasekhaya njengoSignal High, Snake Park kunye Hectic Nine-9. Umxholo ojongwe kakhulu phakathi kolutsha yindawo ye-17: 00 slot, yokuhambisa uthotho lwe-anime ukusuka kwiToei Animation kunye neTV Tokyo, ngokukodwa ukuhambisa uthotho oludumileyo olunenkolo elandelayo efana Yu-Gi -Oh!, Yu-Gi-Oh! GX, Beyblade, Ibhola yedragini, Dragonball Z, Dragonball Z Kai, Dragonball GT, Naruto Shippuden, One Piece kunye ne Bleach.
Last edited on 28 EyeThupha 2021, at 17:39
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-28 EyeThupha 2021, kwi-17:39